ဝက်ဝံရုပ်ထွင်းထုတာက ဆာမူရိုင်းရဲ့အလုပ်လား ? - JAPO Japanese News
ဝက်ဝံရုပ်ထွင်းထုတာက ဆာမူရိုင်းရဲ့အလုပ်လား ?
လာ 28 Dec 2020, 16:18 ညနေ
ဤအရာများထဲမှာမှ အန္တရာယ်အရှိဆုံးကတော့ အညိုရောင်ဝက်ဝံဖြစ်ပါတယ်။
ပုံများကနေတစ်ဆင့်ကြည့်နေသောကြောင့် ပတ်ပတ်လည်မျက်လုံးများကချစ်စရာကောင်းတယ်လို့ သင်ပြောနိုင်ပါတယ်။
အရပ် ၂ မီတာရှိပြီးအလေးချိန် ၄၀၀ ကီလိုဂရမ်ရှိသောဒီဝက်ဝံဟာ ပြေးတဲ့အခါအရှိန် ၅၀ ကီလိုမီတာသို့ရောက်ရှိပုံရပါတယ်။
ထို့ကြောင့်၎င်းဝက်ဝံဟာတိုက်ခိုက်တဲ့အခါ အနိုင်ရသူဖြစ်ပြီး ပြိုင်ဘက်ရှားပါတယ်။
ထိုသို့သောဝက်ဝံရုပ်များထွင်းထုပြုလုပ်ထားပြီး ဟော့ကိုင်းဒိုးမှအမှတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းတစ်ခုအဖြစ် နာမည်ကြီးပါတယ်။
ဝက်ဝံအစစ်အမှန်များက ဤကဲ့သို့သောဆော်လမွန်ငါးမျိုးကို ဖမ်းပြီးစားခဲ့ကြပါတယ်။
စကားမစပ်, ဒီလိုအရုပ်မျိုး ဟိုးအရင်တုန်းက ကျွန်တော့ဆီမှာရှိပါတယ်။ အခုတော့ ဘယ်နေရာရောက်နေလဲမသိဘူး.. ..
ဒါပေမဲ့ ဒါကဆာမူရိုင်းရဲ့အလုပ်ပဲဆိုတာကို ကျွန်တောတောင်မှမသိခဲ့ပါဘူး။
သို့သော် ၁၈၀၀ ပြည့်လွန်နှစ်များနှောင်းပိုင်းမှာ ဆာမူရိုင်းခေတ်ကုန်သွားတဲ့အခါ ဤဝက်ဝံရုပ်တွေကို သစ်သားထွင်းထုသောလုပ်ငန်းအဖြစ် ဆာမူရိုင်းနှင့်အခြားသူများက ဝက်ဝံရုပ်ကိုထွင်းရန်ကြိုးစားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဝက်ဝံရဲ့ဇစ်မြစ်တွေကို ၁၈၇၈ ခုနှစ်တွင်ပြန်တွေ့နိုင်ပါတယ်။
ထိုနေရာကတော့ Yakumo-cho၊ Futami-gun၊ Hokkaido ဖြစ်ပါတယ်။
(Hokkaidou Futamigun Yakumocho) ၎င်းသည်ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာနှင့်ဂျပန်ပင်လယ်တို့ကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့သောမြို့ဖြစ်ပါတယ်။
၁၈၇၈ တွင်ဆာမူရိုင်းခေတ်ပြီးနောက် ထိုအချိန်ကဂျပန်အစိုးရ၏မူဝါဒကြောင့်အလုပ်ပြုတ်ခဲ့ရပါတယ်။
လက်အောက်ငယ်သားတို့အလုပ်ဆုံးရှုံးနေကြသည်နေစဉ် အဲဒါကို အဆင်ပြေအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် Owari မျိုးနွယ်စု(လက်ရှိ Nagoya တဝိုက်မှာရှိလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။) သခင်သည်မိမိ၏လက်အောက်ငယ်သားများကိုဤပြည်သို့ပြောင်းရွှေ့စေခဲ့ပါတယ်။သူတို့သည်မြေကွက်သစ်ကိုရှင်းလင်းရန်နှင့်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်မြို့ကိုတည်ဆောက်ရန်ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်။
ထိုနောက် ၁၉၂၃ ခုနှစ်တွင် နောက်မျိုးဆက်မင်းဆက်များသည် ဥရောပသို့အလည်အပတ်သွားခဲ့ပြီး ဆွစ်ဇာလန်သစ်သားထွင်းထုသည့်ဝံများကိုဟော့ကိုင်းဒိုးသို့ပြန်ပို့ခဲ့ကြပါတယ်။
လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးအားဖြင့်ခက်ခဲတဲ့ဘဝမှာ ၎င်းသည်ဘဝအတွက် အနည်းငယ်ပိုလိုလျှင် သစ်သားဖြင့်ထွင်းထားသည့်ဝက်ဝံများပြုလုပ်ရန်သခင်က ပထမဦးဆုံးအကြိမ်တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ထိုကဲ့သို့သောသစ်သားထွင်းထုသောဝက်ဝံ၏မွေးရပ်မြေ Yakumo-cho တွင်သစ်သားထွင်းထုသောဝက်ဝံပြတိုက်တည်ရှိပါတယ်။အောက်ခြေမှာဝက်ဝံအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။
ညာဘက်မှာကတုပထားတဲ့ Kuma-chan ပါ။
ဝက်ဝံနှင့်ဆာမူရိုင်းများ၏သမိုင်းကြောင်းကို သင်ပြောပြနိုင်မယ်ဆိုရင် ဂျပန်လူမျိုးတွေကိုတောင်မှ အံ့အားသင့်စေလိမ့်မှာပါ။
ပြိုင်မြင်းတွေလိုခြေတံကမရှည် အပြေးကလည်းမမြန်ပေမဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကအားကျစရာကောင်းတဲ့ ဟော့ကိုင်းဒိုးရဲ့ Banei မြင်းပြိုင်ပွဲ
၈လပိုင်း ၁၃ကနေ ၁၅ ရက်နေ့ထိ ရေနားကို သွားလို့မရဘူးဆိုတာ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ……
Ghibli ရုပ်ရှင်ထဲမှာ နေချင်စရာအကောင်းဆုံးအဖြစ် TOP 10 စာရင်းဝင်ခဲ့တဲ့အိမ်လေးများ !!!